कमाएर परिवारलाई दिउँला भनेको कोरियामै अस्ताए उत्तरकुमार, परिवारमा रूवाबासी! – PathivaraOnline
Home > प्रवास > कमाएर परिवारलाई दिउँला भनेको कोरियामै अस्ताए उत्तरकुमार, परिवारमा रूवाबासी!
admin March 11, 2020 प्रवास, समाचार	0
धनकुटा-कोरियामा एक नेपालीको मृ’ त्यु भएको छ । मृ त्यु हुनेमा धनकुटा नगरपालिका–७ डाँडागाउँका ५४ वर्षीय उत्तरकुमार राई रहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा कोरियामा रहेका उनी मंगलबार बिहान शौचालयमा बे होस भेटिएका थिए ।
लगत्तै अस्पताल लगिएपनि उनको उपचारका क्रममा नि:धन भएको बताइएको छ । मृ त्युको कारण खुल्न सकेको छैन। उनको श;वलाई नेपाल पठाउने प्रयास भइरहेको बताइएको छ ।
राई करिब १० वर्ष अघि कोरिया गएका थिए। मृ तक राईका श्रीमती र एक छोरी रहेका छन् । उनको नि:धन पछि परिवारमा रुवाबासी चलेको छ ।
अमेरीकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई क्वारेन्टाईनमा बस्न आग्रह
ऐजेन्सी । अमेरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई क्वारेन्टाईनमा बस्न आग्रह गरीएको छ । उनलाई अमेरकिी स्वास्थ्य अधिकारीले कोरोना संक्रमणको जोखीम हुनसक्ने भन्दै सर्तक गराएका छन् । ७३ वर्षीय ट्रम्प तीन दिन अघि जर्जीयाको भ्रमणमा गएका बेला त्याहाँका अधिकारीहरुसंग हात मिलाउने कार्य गरेका थिए ।
ती अधिकारीहरु कोरोना प्रभावीत मानिसहरुको संपर्कमा गएको आफैँले पुष्टि गरीसकेका छन् । ति अधिकारीहरु अहिले आफै आफ्नै घरभित्र सेल्फ क्वारेन्टाईनमा बसिरहेको भनेर आजको वासिंटन टाईम्सले लेखेको छ । तर राष्ट्रपति ट्रम्पका स्वास्थ्य विज्ञहरुले हालसम्म उनमा कोेरोना संबन्धी कुनैपनि लक्षण नदेखिएकाले अहिले नै नआत्तीन सुझाएका छन् ।
फेरि टिप्पर आतङ्कः एक महिलाकाे मृ त्यु
नेपाली श्रीमान बितेपनि नेपालमै उनको विधवा भएरै बस्ने फिलिपिनी बुहारी भन्छिन फिलिपिन्स जान्न … (पुरा विवरण हेरी शेयर गर्नुहोस्)